Funny Archives - Real Day MM
ဝက်တွေရဲ့အားပေးသံများနဲ့ တကယ့်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်လို ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ သီဆိုနေတဲ့ ကောင်လေးကြောင့် လူအများ ရယ်မောခဲ့ရ
ဝက်တွေရဲ့အားပေးသံများနဲ့ တကယ့်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်လို ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ သီဆိုနေတဲ့ ကောင်လေးကြောင့် လူအများ ရယ်မောခဲ့ရ မကြာသေးမီက အွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းမှာ Men97 လို့ အမည်ပြောင်ပေးထားတဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အသွင်အပြင်နဲ့ 6-pack နဲ့ လူငယ်တစ်ဦးဟာ ဝက်တွေကို ထိန်းကျောင်းရင် တက်ကြွစွာ သီချင်းသီဆိုနေတဲ့ ဗီဒီယာ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ လျင်မြန်စွာပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ် ။ အဆိုပါကောင်လေးဟာ တကယ့်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်လို ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ပရောဖက်ရှင်နယ် အမှုအရာနဲ့ …
လက်ထပ်တော့မည့် ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်၏ မျိုးပွားအင်္ဂါကို လေးခွနဲ့ပစ်ပြီး စမ်းသပ်သည့် အာဖရိကယဉ်ကျေးမှု (ရုပ်သံ) ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ ဒီတခါမှာတော့ စာဖတ်သူတို့အဖို့ အာဖရိက ယဉ်ကျေးမှု တစ်မျိုးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ဟာ အရွယ်ရောက်လာလို့ မိန်းမယူတော့မယ်ဆိုရင် သူလက်ထပ်ယူမည့် မိန်းခလေးရဲ့ဆွေမျိုးထဲက လူသုံးယောက်ကိုရွေးပြီးသူတို့တော်ရမဲ့ ယောဖဖြစ်သူရဲ့ယောက်ျားလေး မျိုးပွားအင်္ဂါကို လောက်လေးခွနဲ့ သုံးကြိမ် ပစ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လောက်လေးခွနဲ့ သုံးကြိမ်ပစ်လိုက်တာကို ခံနိုင်ရည်ရှိနေရင် သူတို့ရဲ့ …
ဆိုင်ကယ်မောင်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ စကားကို ယုံလိုက်မိသောအခါ
ဆိုင်ကယ်မောင်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ စကားကို ယုံလိုက်မိသောအခါ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ၊အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ဆိုင်ကယ်မောင်းတတ်တယ်လို့ပြောတဲ့သူငယ်ချင်းစကားကိုယုံမိတဲ့ကောင်မလေးရဲ့အဖြစ်ကို၊ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်စိတ်ပြေလက်ပျောက်အနေနဲ့ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ ပရိတ်သတ်ကြီးများစိတ်ပြေလက်ပျောက်အနေနဲ့အာ့ဒီပုံကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်၊အားလုံးလဲအန္တာရာယ်ကင်းဘေးရှင်းပြီးကျန်းမာချမ်းသားကြပါစေ၊အေးချမ်းတဲ့နေရက်တွေအမြန်ရောက်ရှိနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်းဒီသတင်းကိုတင်တက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Credit…original writer [Zawgyi] ဆိုင္ကယ္ေမာင္းတတ္တယ္ဆိုတဲ့ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ စကားကို ယုံလိုက္မိေသာအခါ ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ၊အခုတစ္ခါမွာဆိုရင္ေတာ့စာဖတ္ပရိတ္သတ္ႀကီးမ်ားအတြက္ဆိုင္ကယ္ေမာင္းတတ္တယ္လို႔ေျပာတဲ့သူငယ္ခ်င္းစကားကိုယုံမိတဲ့ေကာင္မေလးရဲ႕အျဖစ္ကို၊ပရိတ္သတ္ႀကီးမ်ားအတြက္စိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္အေနနဲ႔ေျပာျပေပးသြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ ပရိတ္သတ္ႀကီးမ်ားစိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္အေနနဲ႔အာ့ဒီပုံကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္၊အားလုံးလဲအႏၲာရာယ္ကင္းေဘးရွင္းၿပီးက်န္းမာခ်မ္းသားၾကပါေစ၊ေအးခ်မ္းတဲ့ေနရက္ေတြအျမန္ေရာက္ရွိႏိုင္ပါေစလို႔ဆုေတာင္းေပးရင္းဒီသတင္းကိုတင္တက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ Credit…original writer
ဆူခံရတဲ့အချိန်တိုင်း အိမ်ခေါင်မိုးပေါ် တက်နေလေ့ရှိတဲ့ ခွေးလေး
ဆူခံရတဲ့အချိန်တိုင်း အိမ်ခေါင်မိုးပေါ် တက်နေလေ့ရှိတဲ့ ခွေးလေး ဒီခွေးလေးကတော့ အဆူခံရတဲ့အချိန်တိုင်း အိမ်ခေါင်မိုးပေါ် တက်နေလေ့ရှိပါတယ် ။ အချို့နေ့တွေမှာ သူ့ရဲ့ပိုင်ရှင်အဘွားကြီးကမဆူပေမဲ့လည်းအကျင့်ပါပြီးမနက်စောစောစီးစီးအိမ်ခေါင်မိုးပေါ်တက်နေလေ့ရှိပါတယ် ။ ကြည့်လိုက်ရင်တော့ အိမ်နီးနားချင်းတွေကို မနက်စောစောစီးစီးခေါ်ထတဲ့ ကြက်တွေလို သွန်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားသင်ယူနေတဲ့ ပုံစံမျိုးလိုပါပဲ ။ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်စိတ်အပန်းဖြေနိုင်တဲ့နေရာမျိုးလေးလိုပါ။တစ်ခါတစ်ရံမိုးရွာတော့မဲ့အချိန်တွေဆိုရင်သခင်က ခေါင်မိုးပေါ်ကနေ ခေါ်ဆင်းရလေ့ရှိကြောင်းလည်း သိရပါတယ် ။ crd [Zawgyi] ဆူခံရတဲ့အခ်ိန္တိုင္း အိမ္ေခါင္မိုးေပၚ တက္ေနေလ့ရွိတဲ့ …
သုံးဘီးဆိုင်ကယ်ကို ခွေးက တက်မောင်းခဲ့လို့၊ ဖုန်းဆိုင်ကို အရှိန်ပြင်းစွာတိုက်မိခဲ့
သုံးဘီးဆိုင်ကယ်ကို ခွေးက တက်မောင်းခဲ့လို့၊ ဖုန်းဆိုင်ကို အရှိန်ပြင်းစွာတိုက်မိခဲ့ ဇာတ်ကားတွေ Animation ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေ လေယာဉ်တွေ၊ ကားတွေကို တက်မောင်းတဲ့ ပြကွက်တွေဟာ အပြင်လက်တွေ့ဘဝနဲ့ သိပ်နီးစပ်မှုမရှိပေမယ့် အတော်လေး ကြည့်ကောင်းတတဲ့ ပြကွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေဟာ ကားတွေ၊ ဆိုင်ကယ်တွေကို မတော်တဆ မောင်းခဲ့မိလို့ ထိခိုက်ပျက်ဆီးမှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း တရုတ်နိုင်ငံမှာ ခွေးတစ်ကောင်က သုံးဘီဆိုင်ကယ်ကို …
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနာရီစင်ကြီး …..
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနာရီစင်ကြီး ….. Zawgyi [အောက်တွင် Unicode ဖြင့်ဖတ်ရှုနိုင်သည်] ” ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး နာရီစင္ ျမန္မာျပည္မွာ ရွိေနတာပဲကိုး ” လွေတာသားတစ္ေယာက္ ေဈးဝယ္ဖို႔ဝက္လက္ၿမိဳ႕ေရာက္ေတာ့ ေဈးထိပ္နာရီစင္ၾကည့္မိသတဲ့။ သူၾကည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ နာရီစင္ရဲ႕အေနာက္ဖက္နာရီက ၉:၀၀ နာရီထိုးေနသတဲ့။ ဒါနဲ႔ နာရီစင္ကိုလက္ယာရစ္ပတ္ၿပီး ေျမာက္ဖက္ကနာရီၾကည့္ေတာ့ ၁၂:၀၀ နာရီျပေနသတဲ့။ နာရီစင္ကိုလက္ယာရစ္ဆက္ပတ္ၿပီး အေရွ႕ဖက္ကနာရီကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ၃:၀၀ နာရီျပေနသတဲ့။ …
သြော်… ဒီပုံကို ကြည့်ပြီးဂျပန်တွေ ရေချိုးကြတဲ့အဖြစ်ကို သွားသတိရတယ်….
သြော်… ဒီပုံကို ကြည့်ပြီးဂျပန်တွေ ရေချိုးကြတဲ့အဖြစ်ကို သွားသတိရတယ်…. ဟိုးတုန်းက လူကြီးတွေပြောတာ ကြားဖူးတာပါ။ ဂျပန်တွေ ဗမာပြည်ကို သိမ်းပိုက်ထားတုန်းအခါကပေါ့။ဂျပန်တွေဟာ ချောင်းမရှိတဲ့ရွာမျိုးမှာ စခန်းချပြီဆိုရင်ရွာလယ်မှာရှိတဲ့ ရေတွင်းကိုလာပြီး တန်းစီရေချိုးကြသတဲ့။ အားလုံးက ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ချိုးကြတာမို့ဂျပန်ချိုး ချိုးတယ်လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ဒါကိုယ်လုံးတည်း ချိုးတယ်ဆိုတာအခုချိန်ထိ လူတိုင်းသိကြပါတယ်။ ကြာတော့ သမီးပျိုရှိတဲ့ မိဘတွေကဒီလိုရေချိုးတာကို မနှစ်သက်တာမို့ဂျပန်တွေခန့်ထားတဲ့ရွာသူကြီးဆီကိုသွားပြီး အကြောင်းကြားသတဲ့။ သူကြီးကလည်း”သမီးရှင်တွေဆိုတော့ အိမ်း ဒါလည်းဟုတ်ပေသားပဲ”ဆိုကာသူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ ဂျပန်မာစတာကြီးဆီသွားပြီးမေတ္တာရပ်ခံ …
သမီးကို ခွေးနဲ့အတူကစားရန် ထားခဲ့ပြီး မိနစ်၃၀ အကြာမှာ ခွေးကလေးက မှင်ခြစ်ရာတွေနဲ့ မဲတူးနေတာကြောင့် မိခင်ဖြစ်သူ အံ့သြသွားခဲ့ရ
သမီးကို ခွေးနဲ့အတူကစားရန် ထားခဲ့ပြီး မိနစ်၃၀ အကြာမှာ ခွေးကလေးက မှင်ခြစ်ရာတွေနဲ့ မဲတူးနေတာကြောင့် မိခင်ဖြစ်သူ အံ့သြသွားခဲ့ရ Zawgyi အောက်တွင် Unicode ဖြင့်ဖတ်ပါ။ သမီးကို ေခြးနဲ႔အတူကစားရန္ ထားခဲ့ၿပီး မိနစ္၃၀ အၾကာမွာ ေခြးကေလးက မွင္ျခစ္ရာေတြနဲ႔ မဲတူးေနတာေၾကာင့္ မိခင္ျဖစ္သူ အံ့ၾသသြားခဲ့ရ အနည္းငယ္ဆိုးသြမ္းမႈရွိျခင္းက ကေလးမ်ားရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း …
ဖင်နိုက်ထားတဲ့လက်နဲ့ customer အတွက် အာလူးကြော်ထည့်ပေးနေခဲ့တဲ့ ဆိုင်ဝန်ထမ်းတစ်ဦး
ဖင်နိုက်ထားတဲ့လက်နဲ့ customer အတွက် အာလူးကြော်ထည့်ပေးနေခဲ့တဲ့ ဆိုင်ဝန်ထမ်းတစ်ဦး မကြာသေးခင်က McDonald အသင့်စား စားသောက်ဆိုင်ရဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဟာ သူမရဲ့စားသုံးသူအတွက် အာလူးကြော် မထည့်ပေးခင် သူမဘောင်းဘီထဲဖင်နိုက်နေတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကို TikTok မှာ တင်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတိုတောင်းတဲ့ဗီဒီယိုက အင်တာနက်အသုံးပြုသူတိုင်းကို ရွံ့ရှာသွားစေခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၁၄ရက်နေ့က မျှဝေခဲ့ချိန်ကစပြီး အဆိုပါဗီဒီယိုဟာ TikTok မှာ ကြည့်ရှုသူပေါင်း ၂.၄ သန်းကျော်အထိကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုထဲကအရ အဆိုပါအလုပ်သမားဟာ order …
မုန့်စိမ်းပေါင်းရောင်းတဲ့ အဒေါ်ကြီးကို နိုင်ငံခြားသားကြီးက ဘာတွေရောင်းတာလဲလို့ မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ… Zawgyi အောက်တွင် Unicode ဖြင့်ဖတ်ပါ။ မုန္႔စိမ္းေပါင္းေရာင္းတဲ့ အေဒၚႀကီးကို ႏိုင္ငံျခားသားႀကီးက ဘာေတြေရာင္းတာလဲလုိ႔ ေမးၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ… မနက္ေစာေစာ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္မႏၲေလးဘူတာကေနဆင္းလာတယ္။ သူ႔မွာပါလာတဲ့ ကင္မရာနဲ႔ မုန္႔ေစ်းတန္းႀကီးကိုတဖ်ပ္ဖ်ပ္ ႐ိုက္တာေပါ့ေလ။ အဲဒီမွာ မုန္႔စိမ္းေပါင္းအတုံးႀကီးကိုေတြ႕ေတာ့ေရာင္းတဲ့ အေဒၚႀကီးကို ႏိုင္ငံျခားသားကစိတ္ဝင္တစား ေမးတယ္။ “What is this ? ” …